Thailandy: Nakatona ny vohikalan’ny trano famoaham-baovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Janoary 2019 3:05 GMT
(Marihina fa tamin'ny volana Janoary 2008 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nakaton'ny Net Service Ltd mpampiantrano azy ny tranonkalan'ny Fah Diew Kan (Same Sky), gazetiboky ara-tsosialy sy ara-politika mivoaka isan-telo volana, noho ny fanivaivana ny mpanjaka. Nitranga taorian'ny fanerena avy amin'ny Minisiteran'ny Teknolojiam-baovao sy ny Fifandraisana (TIC) izany.
Nilaza tamin'ny tranonkalan-gazety Prachatai mpivoaka isan'andro ny toniandahatsoratry ny Same Sky fa ” nanery ny lohamilina mpampiantrano tsy hampiantrano intsony ny tranonkalany ny TIC, raha tsy izany dia tsy afaka hiditra amin'ny lohamiliny ny orinasa mba hanohizany ny fanomezana tolotra ho an'ny tranonkala hafa. “
Araka ny voalazan'ny Freedom Against Censorship Thailand na Falalahana Manohitra ny Sivana any Thailandy (FACT), tsy ara-dalàna ny fanakatonana ny Fah Diew Kan raha araka ny Lalàna vaovao momba ny Heloka An-tserasera ao Thailandy. ” Ny baikon'ny fitsarana irery ihany no iaingan'ny sivana rehetra toy izany ary tsy mbola nisy ny fangatahana natao. Tsy maintsy hialohavan'ny taratasy fanadihadiana ny fangatahana avy any amin'ny fitsarana fa tsy ny fanakatonana avy hatrany.” “